Umdlali Unjani Ukuba Ngummeli Wamahhala Wenkululeko?
Ukuba ngummeli wamahhala ongenakukhuseleka kwi-NFL
Igosa elingenakuvinjelwa elikhululekile lingasayinela nayiphi na iklabhu, kungekho mbuyekezo efunekayo kwiklabhu yakhe endala, ngomhla wokuqala ohleliweyo kwikampu yokuqala yokuqeqeshwa kwe-NFL (ngokubanzi ngoJulayi). Ngelo xesha, amalungelo akhe abuyele kwiqela lakhe elidala ukuba lenze i-tender "offer" (i-110 ekhulwini lomvuzo wonyaka odlulileyo) kuye ngoJuni 1. Ibhola lakhe elidala lide lide lide ngoLwesibili emva kweveki ye-10 yonyaka -mthumelele.
Ukuba akayi kusayina ngelo xesha, kufuneka ahlale ngaphandle kwexesha.
Ukuba akukho festile inikwa ngoJuni 1, umdlali angasayinwa yiyiphi iklabhu nangaliphi ixesha kulo lonke ixesha.
I-agent ekhululekile engenakukhutshwa kufuneka izalise ii-season ezine okanye ngaphezulu ezongezelelweyo ngekontrakthi ephelelwe yisikhathi.
Ngo-2016, kukho ezinye iinjongo ezingenakukhutshwa ngaphandle kwenkululeko. Ngokomzekelo, nantsi ezinye zezona zinto zifumanekayo.
1 - URussell Okung, OL, Seattle
Okung lide liphezulu igama elisele. Uthotywe yi-6 ye-Seattle kwisiqulunqo se-NFL ka-2010 kwaye ininzi kakhulu yayihlala ifikelele kwintlawulo ephuma e-Oklahoma State.
I-Seahawks isandul Baye balahleka i-linemen encinci kwi-ejensi yamahhala.
U-Okng usacinga ukunikezelwa kwe-Seattle, kwaye u tyelele ii-Steelers, iziGodi kunye neengonyama. U-Okung kuthiwa u tyelele ePittsburgh kwakhona.
U-Okung umela yena kunye negama afuna ukufumana ubuncinane i-$ 10.5 yezigidi ngonyaka.
Wayenobungqina befayili ngoFebhuwari, kwaye mhlawumbi akayi kufumana loo nto.
Sekunjalo, ungumfana omncinane oshiywe kwiqumrhu apho eso sikhundla sithandwa kakhulu.
2 - Andre Smith, OL, eCincinnati
USmith wayeyi-All-American e-Alabama ngokuvumelana kunye nokukhethwa koyilo oluqala nge-Bengals ngo-2009, uNombolo 6 jikelele.
Uyaziwa ngokuba yi-blocker engcono kakhulu kunokukhusela kwikota, kwaye emva kokuqala kwamatye eCincinnati, waba ngumqali oqinileyo.
IiVikings zazithungela iphepheni ebomvu kule veki edluleyo, kodwa zazingenakukwazi ukuzimisela isivumelwano.
Amakhadidi anomdla ngokulinganayo, njengokuba yi-Bucs, kodwa oku kubonakala ngathi kukuncintisana kwamacandelo amabini phakathi kweVikings kunye neCardinals kwangoku.
Kwangena ixesha elide kwi-NFL ngo-2008 ngezinye izinto ezikulindeleke kakhulu emva kokufunyanwa okwesibini kwiRams. Wayenamandla okwenza umdlalo, njengoko kuboniswe yiplani ye-Rams yokumsebenzisa njengomphelo wokuzikhusela kunye ne-linebacker.
Kwiminyaka eyisixhenxe ye-NFL, yonke i-Bengals, yafaka iisaka ezingama-51.5.
Kodwa, kwakuyiminyaka emibili yokugqibela eyayilimaza isitokisi sakhe. Ukunciphisa ukulimala, ukuveliswa kwexesha elide kunqabile kakhulu.
Wavakashela abaPatrioti, abathandekayo kakhulu ekupheleni kokuzikhusela, kodwa ixesha elide liya kubaqinisa.
Umntwana oneminyaka engama-30 uqhubeka ehlola amanye amaqela kwaye uthe ufuna ukudlala umdlali.
Uceba uhambo oluya eDallas, apho, ngokungafani neNew England, wayeza kugcwalisa umgodi. Ubuye watyelela eWashington naseAtlanta.
Nangona wayeneminyaka emine ephethe iingxowa zakhe ezimbini zokugqibela, ixesha elide libonise ukuba lingaba ngumbane ophazamisayo xa ephilile, njengoko kuboniswe ngetaka ezingama-41.5 ayenayo kwiminyaka emine ngaphambi kokulimala kwakhe.
I-Cowboys ingathanda ukumthatha ngokukhethekileyo ukususela ngo-Randy Gregory uya kulahleka kwimidlalo emine yokuqala yexesha ngenxa yokuphulwa kwemithetho yokusetyenziswa kakubi kweziyobisi.
4 - URobert Griffin III, iQB, iWashington
Ngokomntu owayengumdlali weWashington Redskins owayengumKristu uChryley Cooley kwi-ESPN, umgca we-Redskins owenqabelayo akazange amthande uRobert Griffin III kunye nabamkeli abanzi abazange bahlanyele ngaye.
Kodwa, iinqonga zekota kunye nobukhulu bakhe kunye nekhono lobuchule alunakuze lize lize lihlale kwi-NFL, kwaye ndicinga ukuba unokuyenza ngendlela enkulu kule nqwaba. Unayo ngaphambili, khumbula.
Ndiyayithanda indlela uGriffin engazange ahlabe ngayo aze ahlekise xa uKirk Cousins ​​ethatha umsebenzi wakhe wokuqala kunyaka ophelileyo. Akazange afune ukuba athengiswe, kwaye akazange abangele ingxabano ekamelweni lokungqinela, ubuncinane ukuba uluntu luyazi.
Lo mfana ungumlingani ophezulu we-NFL kwikota kwaye unokuncedisa iqela ngendlela enkulu.
Wachukumisa iiJets ekusebenzeni kwakutshanje. Kuyabonakala ukuba iiJets azifuni ukuba uRyan Fitzpatrick ahlale engalunganga kuba bamnika amanqatha.
Kukho intetho uGriffin ofuna ukudlala eLos Angeles, kodwa ekugqibeleni wasayina noCleveland.
5 - Reggie Nelson, ukhuseleko, iCincinnati
U-Nelson uneminyaka engama-32 ubudala, kodwa ukhuseleko kwi-NFL ludinga ukuxhoma ixesha elide kunezona zintsika, apho ukukhawuleza kubaluleke kakhulu. Ukhuseleko lithembele kwi-smarts ngokunjalo nezilwanyana kunye nabalungileyo abangadlala kwi-NFL baze badala kwaye baluhlaza. Indawo yokukhusela yilapho iindawo ezincinci zenzeke khona ekudleni.
Ngaphezu koko, uNelson wayenomnye weminyaka engcono kakhulu yomsebenzi wakhe kunyaka odluleyo kunye namaBangali ngeentlobo ezisibhozo kunye ne-Pro Bowl yakhe yokuqala.
Kananjalo unako ukuhlala uphilile, edlala iimidlalo ezithandathu kuphela ekubeni wangena kwiligi.
AmaBangali akabonakali athambekele ekuphumeni kwendlela yokumgcina ekubeni basayine i-George Iloka eneminyaka engama-25 ubudala, kodwa amaGraants abonise umdla.
6 - uNick Fairley, iDT, Rams
U-Nick Fairley unetani leetalente, kodwa akakaze aphile ngokulindelekileyo xa ebhaliwe nge-13 ekhethiweyo jikelele ngeengonyama ngo-2011.
Wayedimaza iminyaka yakhe yokuqala eDetroit, nangona wabonisa ukukhanya kwamandla akhethekileyo.
U-Fairley ungomnye walabo bafana abangaba phakathi kweligi ye-liites ukuba unika umzamo wakhe opheleleyo ngexesha lonke. Ngelishwa, akunjalo.
Kufuneka udibanise into phambi kwakhe, njengengxoxo yonyaka owodwa wasayina noSt. Louis kwaye wadlala kakuhle.
7 - URyan Fitzpatrick, iQB, iiJets
Ulungile u-Ryan Fitzpatrick.
Kufuneka udibanise lo mfana. Ubekho kwi-liague ngokukhawuleza njengokuba kungabonakali ukusixhasa kwaye ekugqibeleni unomnyaka wokuphumla.
Kwaye iiJets zinikezela iitshekhi zokulondoloza.
Kuyavunywa, akayena uJoe Namath, kodwa uxabisa ngaphezu kwezinto iiJets ezinikelayo; Amacandelo amabini ama-$ 7 yezigidi ngonyaka, ngokwemibiko eyahlukeneyo yeendaba kunye nolwazi lweentetho.
Malunga neqela elilodwa elibonisa uhlobo oluthile lomdla kuFitzpatrick yiDenver, elalilahlekelwa yimizuzu yesibini ephezulu kwi-retrait and free agency.
Ngaba Ufanele Udlale ngeePips ezimfutshane?
Indlela yokuqalisa iParagliding
Yintoni iNombolo kwi-'Powericap 'Row ye Scorecard emele?
Ngoko Uthi Uze Ufike Kwi-Bunker epheleleyo Yamanzi: Ngoku Yintoni?
Ukuchaza 'iiTegi ezimhlophe' kwiKlasi yeGalofu
Iimimiselo zeOlimpiki Shot
7 Ezibuhlungu, Ezibuhlungu, Azikho izizathu ezifanelekileyo zokubhalisa kwiKholeji ye-Inthanethi
Indlela yokusebenzisa i-Japanese Word Keikaku
Funda ukudlala i-Guitar Solos
Izindlela ezahlukeneyo Sithandana
Ngaphambi kokuba Ufundise Iklasi Yomculo Wokuqala
Indlela yokwenza iShakespeare Soliloquy
Iimfazwe zesiFulentshi neNapoleonic
Iingqungquthela ezingqongileyo zezopolitiko zexesha lonke
I-Akagi Aircraft Carrier kwiMfazwe Yehlabathi II
Ukuguqula amaPounds ukuya kwiiKilogram IsiGuqulelo sokuguquka